सबैभन्दा रोमान्टिक दिन कुन हो (ईरेटील डिसफंक्शन ड्रग्समा आधारित)? - कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी समुदाय समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु
मुख्य >> कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा >> यहाँ हप्ताको सब भन्दा रोमान्टिक समय छ
यहाँ हप्ताको सब भन्दा रोमान्टिक समय छ
के शुक्रबार हप्ताको सबैभन्दा रोमान्टिक दिन हुन सक्छ? धेरै व्यक्ति सोमबार फार्मेसीमा आफ्नो औषधी लिन्छन्। तर, लोकप्रिय ईरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स को लागि नुस्खा भर्दछ, विशेष गरी सिल्डेनाफिल , उर्फ भियाग्रा Lespike शुक्रवारमा, एकलकेयर डाटाका अनुसार।
अन्य सामान्यतया निर्धारित इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधिहरूले समावेश गर्दछ:
सियालिस , Adcirca ( tadalafil )
Levitra , Staxyn ( vardenafil )
यो प्रवृत्ति पछाडि के छ? चिकित्सकहरूले यी औषधीहरूको लोकप्रियता सप्ताहन्त र रोमान्टिक बिदाको बारेमा वर्णन गर्दछन्।
ईडी एक वर्ष दौर चिन्ता हो
हुनसक्छ यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि पुरुषहरूले सप्ताहन्त वा अगाडि अवस्थित अन्य विशेष घटनाहरूको पूर्वानुमानमा ईडी मेडहरूको लागि पर्चीहरू पाउनेछन्।
युगेन, ओरेगनका पारिवारिक औषधि विशेषज्ञ र एमडेडी हेल्थका योगदानकर्ता एमडी, डग्लस जेफ्रेले औंल्याए कि केही अनुसन्धानले वर्षको कुनै खास समयमा ईडी गोलीका लागि सिफारिसहरूमा वृद्धि भएको फेला पारेको छ, जुन प्रायः नयाँ वर्षको चाडजस्ता चौथो जस्ता मनाउने दिनहरू वरिपरि छ। जुलाई, र हो, तथाकथित सबैभन्दा रोमान्टिक छुट्टी, भ्यालेन्टाइन डे।
कसरी नर्भस हुँदा हात मिलाउन रोक्न
भ्यालेन्टाइन दिवस भन्दा पहिलेका हप्ताहरू पालो गिटन्स, एमडी, एक यूरोलोजिस्ट र संस्थापकको लागि वर्षको व्यस्त समय हुन् यौन चिकित्सा को लागी केन्द्रहरु फिलाडेल्फिया र न्यू योर्क मा। उसको अनुमान छ कि गतिविधिमा केही सर्जहरू नयाँ वर्षका रिजोलुसनहरूको नतिजा पनि हुनसक्दछन्, मानिसहरूले नयाँ वर्षमा केही समस्याहरू समाधान गर्ने वाचा गरे।
तर ओहायो स्टेट युनिवर्सिटी वेक्स्नर मेडिकल सेन्टरमा पुरुषहरूको स्वास्थ्य र प्रजनन क्षमतामा विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट, लोरेन्स जेनकिन्स भन्छन् कि भ्यालेन्टाइन डेले प्रायः ED प्रिस्क्रिप्शनहरूको लागि अनुरोधहरूको ठूलो बृद्धि गर्दैन। मैले कुनै भिन्नता कहिल्यै देखेको छैन, किनकि प्राय जसो मानिसहरू मलाई ईडीको लागि वर्षभरि चिन्ताको रूपमा हेर्न आउँदछन्, उनी भन्छन्।
डा। गिटन्स सहमत छन् कि यो पुरुषहरूको लागि एक बर्षे मुद्दाहरूको मुद्दा हो - र यो उनीहरूको यौन प्रदर्शन बढाउन वा सक्षम पार्न कुनै पर्चेको बारेमा मात्र होईन। धेरै व्यक्तिहरू जसले उनको हेरचाह खोजिरहेका छन् उनीहरूको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित छन् सम्भावित कारणहरू तिनीहरूको स्तम्भित डिसफंक्शनको ।
डा। गिटन्स भन्छन्, तिनीहरू केवल एक पर्चेको चाहँदैनन्। तिनीहरू के हुँदैछ जान्न चाहन्छन् र किन उनीहरूले आवश्यक पर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाईंले इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरूको लागि सोध्नु अघि ...
तपाईले ED औषधि विज्ञापन देख्नु भयो। त्यसोभए, तपाईंले सम्भवतः आफ्नो चिकित्सकसँग जाँच गर्न चेतावनी सुन्नुभएको छ यदि तपाईं नाइट्रेट्स लिनुभयो भने, रक्तचाप समस्याहरू, वा मुटुको अवस्था।
त्यहाँ एक चेतावनी छ ती चेतावनी अस्तित्वमा छ। विज्ञहरू भन्छन् कि तपाईको लागि यो एक महत्वपूर्ण परीक्षा, तपाईको शारीरिक परीक्षण र तपाईको बिरामी ईतिहासको समीक्षा सहित तपाईको कुनै रोग पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले नै यो महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्ण परीक्षणले तपाईंको डाक्टरलाई स्वास्थ्य अवस्थाको संकेतहरू हेर्नको लागि अनुमति दिनेछ जुन इरेक्टाइल डिसफंक्शनको कारण हुन सक्छ तर सबै आफ्नै समस्याग्रस्त हुन सक्छ।
ईडी हृदय रोगको लागि प्रारम्भिक चेतावनी संकेत हुन सक्छ, जस्तै हार्ट अटैक वा स्ट्रोक, डा। जेनकिन्स भन्छन्। जोखिम कारक भएको कसैको मूल्यांकन गर्न उत्तम हुन्छ CV CV जोखिम निर्धारण गर्नका लागि। एक तनाव परीक्षण संकेत गर्न सकिन्छ।
ईडीमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अन्य कारकहरूमा मधुमेह, अन्य औषधीको औषधीको साथ अन्तर्क्रिया, मदिराको प्रयोग, र लागूपदार्थको प्रयोगको अन्य प्रकारहरू पर्छन्। साथै, त्यहाँ काममा मनोवैज्ञानिक कारक हुन सक्छ। थप रूपमा, कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरले निम्न लिबिडो र ईडीमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ, जसलाई आवश्यक पर्‍यो भने थप मूल्या and्कन र उपचार आवश्यक पर्दछ। तपाईं मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ ताकि तपाईं सुरू गर्न सक्नुहुन्छ उचित उपचार ।
साथै, प्रत्येक व्यक्ति फरक हुन्छ, र तपाईंको जीवनशैली र आवश्यकताहरूले प्रतीक्षालयमा तपाईंको छेउमा बसिरहेको मान्छे भन्दा फरक ईडी औषधि पुर्‍याउन सक्छ। बिभिन्न औषधिहरु विभिन्न दरहरूमा तपाईंको शरीर भित्र भत्काउनुहोस् , र प्रभावहरू समयको फरक मात्रामा रहन्छ। उदाहरण को लागी, सियालिस जस्ता औषधि २ to देखि hours 36 घण्टा सम्म रहन सक्छ, तर लेवीत्र मात्र चार to पाँच घण्टा र स्टेन्ड्रा छ देखि १२ घण्टा सम्म चल्न सक्छ।
ईडी मेड्सको त्यस्तो रोमान्टिक साइड इफेक्ट छैन
डा। गिटन्सका अनुसार भियग्रा र सियालिस जस्ता औषधीहरू प्रायः पुरुषहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्दछन् र राम्ररी सहन गरिन्छ। तर तिनीहरूले गर्न सक्छन् साइड इफेक्ट । त्यसोभए, एक पटक तपाईले आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन भियाग्रा वा कुनै अन्य ईडी औषधिको लागि भर्नुभयो भने, केही अनौंठोको लागि निश्चित हुनुहुन्छ।
त्यहाँ ईडी को लागी सबै चिकित्सा उपचार संग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरु छन्, डा जेफ्री भन्छन्। … आम औषधीबाट केहि सामान्य साइड इफेक्टहरुमा टाउको दुखाइ, अनुहार र शरीरका अन्य भागहरु लाई सफा गर्ने, खुजली, र पेट दुखाइ समावेश छ।
साथै, यसले तपाईंको रक्तचाप खतरनाक रूपमा कम गर्न निम्त्याउँछ यदि तपाईं ती माथि उल्लेखित नाइट्रेट्स वा नाइट्रोग्लिसरीनमध्ये एक लिइरहनुभएको छ भने। यसैले, यदि तपाईं छाती दुखाई वा हृदय रोगको लागि मूल्या being्कन भइरहेको छ भने, आफ्नो चिकित्सकलाई सँधै सूचित गर्नुहोस् कुनै पनि ईडी मेड्सको प्रयोगको बारे जुन तपाईंले हालसालै लिनुभएको हो। तपाईले एक औषधिको साथ साइड इफेक्ट पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ तर अर्कोबाट होईन, र त्यसैले तपाइँ स्विच गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ। तपाईंको डाक्टरले त्यो निर्णयमा मद्दत गर्न सक्दछन्।
म खाली गोली बोतल संग के गर्न सक्छु?
शुक्रवार होस् वा छैन, पर्खनुहोस् यदि तपाईंलाई तपाईंको ED को बारे मा चिन्ता छ, सम्भव कारणहरू, औषधी साइड इफेक्ट वा अन्य मुद्दाहरू सहित। डा। गिटनले सल्लाह लिनु भन्दा पहिले नै सहयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
कति आइपुप्रोफेन लिन सुरक्षित छ?
कोबरा स्वास्थ्य बीमा के हो?
कति भियग्रा पहिलो पटक लिन को लागी
खोकी को लागी sudafed राम्रो छ?
सिरका स्वास्थ्य को लागी राम्रो के हो
काउन्टर मा वयस्कहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो कफ औषधि
के मँ एकै दिन मा मेरो बच्चा बेनाड्रिल र zyrtec दिन सक्छु
जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो खाना खान को लागी
कसरी राम्रो को लागी toenail कवक बाट छुटकारा पाउन